WokuLawula Crypto Imakethe e 2018 - Blockchain Izindaba
Ochwepheshe bakholelwa ukuthi 2018, singalindela ukuthi ohulumeni kuzokhulisa ukulawula ICO emakethe, cryptocurrency Ukuhwebelana, kanye nabahwebi. Ngesikhathi esifanayo, amabhange ezinkulu maphakathi zomhlaba bayakwazisa cryptocurrency engaba-ikakhulukazi, Bitcoin-futhi alungele ayithenge ngonyaka ozayo. Sesihlole kulokho izinkomba indlela imizimba ehlukahlukene yezezimali ngase mfihlo emakethe ozokhula e 2018.
Iziphathimandla Kulo nyaka yemali emazweni amaningi sethule ICO isiqondiso futhi wabonisa isimo sabo sengqondo ngale ndlela abatshali zimali. Ngakho, China neNingizimu Korea ngokusemthethweni wavimbela ICO owabanjwa mhlaka izindawo zabo. Ngokuphambene nalokho, USA, Canada, Switzerland, Japan, Singapore, futhi U.A.E. izinqumo eziningana ekhishwe akuvumela ICO ngokusemthethweni, nge ICO kokuba ngaphansi kwezimali iziphathimandla isiqondiso. amathokheni Ikhishwe angawa ngaphansi kwemithetho ekhona, Ngokwesibonelo, umuntu olawula ukuthengiselana interfund. Ngokusho Jerry Brito, UMqondisi oMkhulu we engenzi-nzuzo Coin-Centre, ohulumeni izolandela isibonelo US kanye ukwandisa ukulawula yokuthengisa olunikezwa 2018. E-USA, ezinye amathokheni ethize ku-ICO ezibhekwa izibambiso futhi kulawulwa ngaphansi kwemithetho efanele. uStefanu Obie, a partner ngamazwe umthetho ngokuqinile Jones Day, uveza umqondo ofanayo:
“Ngicabanga ukucaciseleka ngokuqinisekile ngeke libe khona ngamakhono izenzo ukuphoqelelwa nezinye isiqondiso ukuthi SEC uyonika esigcawini tokenized. Umlawuli uyazi ngalokhu emakethe, alithathe sina.”
Ochwepheshe bakholelwa ukuthi izenzo ezifanayo ICO iyothathwa maqondana cryptocurrency, ngokuqondene, bitcoin. Dmitriy Zhulin, umsunguli we-ins Ecosystem, uhlala phezu lolu daba:
“Njengoba Bitcoin Booms, isiqondiso ngeke kuqala ukubiyela ICOs bese udlulela cryptocurrencies, Nokho, kunzima manje ukubikezela uma lokhu kuzoba nomphumela emihle noma emibi for embonini. Naphezu ukwanda isiqondiso esikhaleni mfihlo, Ngikholwa ukuthi blockchain njengoba ubuchwepheshe ingathiywa umthetho esindayo.”
ukuthengiselana Bitcoin kakade bavinjelwe emazweni, ezifana Bolivia, Ecuador, India, Bangladesh, Iceland, Kyrgyzstan, Morocco, Nepal, Malaysia, Indonesia, ne-Taiwan. Ngesikhathi esifanayo, China, lapho zivinjelwe zohwebo cryptocurrency Ukuhwebelana wendawo, neRussia balungiselela izikweletu of cryptocurrency isiqondiso, okungase sesingasebenza e 2018. E-United States, bitcoin zimali kuyodingeka ukubika uzuza kusevisi Internal Revenue (IRS) futhi intela ngokuvumelana Isaziso 2014-21.
Ngo-December 4, UK kanye EU nabalawuli zezimali limenyezelwe mayelana uhlela ukudlula umthetho cryptocurrency ngaphansi kwazo abadayisi zimali, kwezinye izimo, kuzodingeka ukudalula ulwazi lwabo lomuntu siqu, futhi cryptocurrency Ukuhwebelana kwakuyodingeka enze iziphathimandla nge ukufinyelela kolwazi lwakho lomsebenzisi. Ngokusho isimo emizimbeni zezimali, la izinyathelo ezidingekayo ukuvimbela okuxhaphaza izimali umsebenzi nobuphekula ngezimali. Nokuvumelana izindlela ezahlukene ubheke lolu daba liyophelela ekuseni 2018, futhi umthetho ngeke sesingasebenza ekupheleni konyaka ozayo.
amabhange G7 emaphakathi kanye cryptocurrency
Gcwele komba likhombisa Ukuqinisa ukulawulwa mfihlo emakethe iziphathimandla zezimali emazweni ahlukahlukene. nabalawuli, Nokho, bheka okunamandla cryptocurrency kanye. Ngo 2018, amabhange G7 emaphakathi uzoqala ukuthenga cryptocurrencies wokuqinisa izinqolobane zabo zakwamanye amazwe. Isimo sami sengqondo sashintsha ngoba amabhange G7 emaphakathi kuyoba lapho ofeleba bitcoin emakethe idlula ukubaluleka zonke SDR (amalungelo akhethekile umdwebo). Kuyinto ngamazwe reserve kwempahla adalwe-International Monetary Fund (IMF) ukwelekelela ilungu amazwe alo’ namafa asemthethweni. ofeleba Bitcoin, Ngokwesibonelo, sesivele lidlule inani le SDR (cishe $291 bhiliyoni).
Elinye iphuzu isimo uyoba ukugcwaliseka izindinganiso G7 zezimali kuthiwa iphelelwa ngokumelene cryptocurrencies. Ngo 2018, siyobona bitcoin nezinye cryptocurrencies eba zezimali eziphawuleka kakhulu ngamazwe ngemakethe ofeleba, ngokusho kongoti.
lwemali National digital
Ngokwakha zezimali digital kazwelonke, emazweni amaningi ngisho uhlela ukuhumusha zezimali zikazwelonke ku blockchain. Jim Angleton, UMongameli Aegis FinServ Corp, Uyaqiniseka ukuthi inani lamazwe esikhiqiza zezimali ezifana luyokhula kuphela:
“Siyazi ukuthi namuhla 108 mazwe ukusebenzisa elikhiphe zezimali digital esivuna ekuqedeni iphepha lwemali yawo futhi kokuphuma kwencika phezu U $ D. Siyakholwa 20+ Amazwe uzoqala uhlolo lwe-Alpha maqondana imigomo yabo.”
Ngo-Okthoba owedlule, safika ukwazi ukuthi iRussia bangazuza siqu kazwelonke imali yayo digital, cryptoruble. Uhulumeni uyowulawula Ukukhishwa kanye nokusakazwa cryptoruble eRussia, nge izimayini cryptocurrency ekubeni kungenzeki. Futhi, UMengameli waseVenezuela Nicolás Maduro umyalelo eliwubhekise, owawuthi kwethulwa cryptocurrency kazwelonke El Petro sihlelelwe ngonyaka ozayo. WaseVenezuela loyimvelo amasheya, ezifana igolide, uwoyela, futhi amadayimane, wawuyosisiza El Petro.
I ICO futhi mfihlo ukuhweba khona ngokomthetho wawuvinjelwe e China, kodwa kwaba lizwe lokuqala ukuthi ihlolwe sibonelo digital lwemali kazwelonke. Yao Qian, ikhanda Digital lwemali Ucwaningo eMnyangweni Yabantu Bank of China, wawuthi Umlawuli zezimali kumele akhiphe cryptocurrency kazwelonke esasizoba ithenda zomthetho ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Ngo-December amabhange amakhulu we-United Arab Emirates futhi Saudi Arabia umkhankaso isinyathelo wezindiza izinkokhelo cross-border. Ukuzibandakanya yasebhange Saudi Arabia emaphakathi kuyaphawuleka, unikezwa ukuthi ngaphambi zazingekho izitatimende ezisemthethweni mayelana cryptocurrency, mfihlo emakethe, noma blockchain ngu nabalawuli wezwe wezimali. I U.A.E., ngesikhathi sayo, okhula eziningana amaphrojekthi blockchain engxenyeni ezimele futhi umphakathi, futhi Global Blockchain oPhethe Dubai ophethe abaningi babo.